तानसेनमा एमाले, अरु को कहाँ जीते पाल्पामा ? – Everest Dainik – News from Nepal
तानसेनमा एमाले, अरु को कहाँ जीते पाल्पामा ?
पाल्पा, १८ असार । पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा नेकपा एमालेले विजय हासिल गरेको छ ।
प्रमुखमा नेकपा एमालेका अशोककुमार शाहीले १० हजार ४५० र उपाध्यक्षमा एमालेकै लक्ष्मी पाठक नौ हजार ७५३ मत ल्याई विजय भएका छन् । प्रमुखका प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका अजयमान कर्माचार्य आठ हजार ०६७ र उपप्रमुखमा नेकाकै लालु रानाले आठ हजार ३८९ मत प्राप्त गरेका छन् ।
बगनासकाली गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका कृष्ण बस्याल विजय रेका छन् । बस्यालले पाँच हजार ५९४ र उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेका सरस्वती चिदीले पाँच हजार ५०५ मत प्राप्त गरी विजय भएका हुन् । बस्यालका निकटम नेकपा एमालेका देवी बस्यालले पाँच हजार ३४६ मत र उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादीका कृष्ण भुषालले चार हजार ०५६ मत प्राप्त गरे ।
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा नेका विजय भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्षमा नेकाका रामबहादुर कार्की र उपाध्यक्षमा काँग्रेसकै चेतना गाहा विजय भएका छन् । नेकाका कार्की पाँच हजार १४६ र चार हजार ९४३ मत प्राप्त गरी विजय भएका हुन् ।
रिब्दीकोट गाउँपालिकामा अध्यक्षमा नेकपा एमालेका नारायण जिसी र उपाध्यक्षमा एमालेकै लक्ष्मी खनाल विजय भएका छन् । जिसीले तीन हजार ८३ र खनालले तीन हजार ८८१ मत प्राप्त विजय हासिल गर्न सफल भएका हुन् । अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी नेकपा माओवादी केन्द्रका लीलाबहादुर कार्कीले दुई हजार ८४८ मत र नेकाका कमला छहरीको दुई हजार ८९९ मत प्राप्त गरे ।
माथागढी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा काँग्रेसका सन्तोषकुमार थापा विजयी र उपाध्यक्षमा निर्मला भट्टराई विजयी भएका हुन् । अध्यक्ष थापाले ६ हजार ९६ मत ल्याएका छन् भने उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका बिमल काफ्लेले चार हजार २१ मत ल्याएका छन् । उपाध्यक्ष भट्टराईले पाँच हजार ६२४ मत ल्याएर विजयी बनेका छन् ।
ट्याग्स: Election Second Phase result, palpa